Nkqu noMehl Amundsen kunye nabalinganiswa bakhe abanemifanekiso ebhalwe ngamanani | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ukungena kwihlabathi lamaphupha aphakathi kwe-Mehl Amundsen
UMehl Amundsen ngu fan enkulu yamabali amnandi kaJRR Tolkien kunye neNkosi yeeRingi. Igcisa lomzekeliso wedijithali obanga ukuthanda kwakhe lo mbhali kunye nendalo yakhe yonke eyenziweyo apho ii-hobbits, i-troll kunye ne-ents bazifumana kumabali amnandi kunye neentsomi ezijikeleze uMhlaba oPhakathi.
Siqala entloko ngo Umzekeliso obonisa iMfazwe yePelennor Fields, idabi eliyintsomi elichazwe kwinxalenye yesithathu yenoveli INkosi yemiGaqo. Kwaqala ngohlaselo lomkhosi waseSauron kwisixeko saseMinas Tirith, ikomkhulu lobukumkani baseGondor, ngasekupheleni kweMfazwe yeRingi. Eli dabi lenzeka kwiintsuku nje ezimbini emva kwedabi lasePelargir, apho i-Aragorn, iNkampani yeGrey kunye nomkhosi wabafileyo woyisa ii-corsairs zase-Umbar zeba iinqanawa zabo.
Indalo yaseTolkien eye yakhokelela ekukhuthazeni amakhulu amanye amabali kunye nemifanekiso emininzi kunye nemizobo ngamagcisa amaninzi. Nkqu noMehl Amundsen ngomnye othwala inzondelelo yakhe yokusifumana kwimizekeliso yakhe ityala kwiDabi lasePelennor Fields.
Sikwafumana neminye imizekeliso emnandi esikhokelela kwi Iilwimi ezivela kuHarry Potter kwaye apho uAmundsen waphinda wasiyolisa ngolwazi lwakhe olukhulu lomzekeliso wedijithali kunye nabalinganiswa abanobuntu obuhle kwindawo yabo.
Umzobi wedijithali onokumangaliswa ngoonobumba obahlukileyo abalinganiswa naye Cinga zonke iintlobo zokuzonwabisa. Ukulandela u-Amundsen sinokudlulela kwi Umzekeliso wedijithali kaKylin Apho abalinganiswa abathandekayo kunye nezilwanyana ezinje ngee-unicorn ezinamaphiko zikwanomgangatho omkhulu kumzobo.
Unayo Facebook y UbuGcisa nguAmundsen.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Ukungena kwihlabathi lamaphupha aphakathi kwe-Mehl Amundsen
Umculi we-Makeup uguqula imilebe yakhe ibe yimisebenzi yobugcisa emangalisayo
IProjekthi Comet ngoku ibizwa ngokuba 'yiAdobe yamaYilo'